April 2019 - POPPIN NEW
မြမြ ဝိညာဉ်ဝင်ပူးခံရသည့် မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ…. မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ “ညီမကိုလည်း လုပ်ကြံပြီးလုပ်တယ်ပြောတယ်၊ ညီမကိုယ်ချင်းစားလို့ ကူညီတာပါ၊ ညီမကို …
သိန်း၅၀၀၀ရအောင်ဘယ်လို ပိုက်ဆံရှာခဲ့ရသလဲဆိုတာပြောပြသွားတဲ့ ပိုပို အခုတလော ပရိသတ်တွေကြားမှာရေးပန်းစားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ပိုပိုရဲ့သိန်းငါးထောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းပါ။ အဲဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လိုများ ရှာထားသလဲဆိုတာကိုလည်း ပရိသတ်တော်တော်များများကသိချင်ကြပါတယ်။ သူကသူရဲ့အိမ်အကြောင်းနဲ့ ဒီပိုက်ဆုံတွေကိုဘယ်လိုစုထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို Myanmar Celebrity နဲ့ Cele ရပ်ကွက် တို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောပြသွားတာတွေရှိပါတယ်။ သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကို မိတ်ဆွေတွေသိအောင်ပြန်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပိုက်ဆံ သိန်း၅၀၀၀ကို ဘယ်လိုရှာခဲ့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို “ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ပိုပို အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရင်ရယ်ချင်တာ …
မြို့ဒေါင့်စေတီပွဲဈေးတန်းမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် (သင်ခန်းစာ ယူသင့်ပါတယ်) မြို့ဒေါင့်စေတ်ီပွဲဈေးတွင် ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးက လူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက် က လှောင်သလိုလိုပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြသည် …….။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲဒေါသထွက်လာပြီး “ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ၊ ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက် ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ” အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုက မကြောက်တဲ့အပြင် ခွက်ထိုးခွက်လန် ဟားတိုက်ရယ်မောပြီး လှောင်ပြောင်နေကြသေးသည် …….။ …
မြမြဝိဥာဉ်ဝင်ပူးခံရသူနှစ်ဦးအား ထပ်မံဝင်ပူးခံရပါက အရေးယူမည်
ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမနှစ်ဦးထံသို့ မြမြဆိုသည့် ၀ိဥာဉ်မှဝင်ပူးကာ အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခံရ ကြောင်း ပြောကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းမြမြဆိုသူမှာ ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံတွင်မရှိသည့်အတွက် ယင်းအလုပ်သမနှစ်ဦးအနေဖြင့် ၀ိဥည်ဝင်ပူးခြင်းဖြစ်စဉ် ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ပါက အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမားစာ ချုပ်(EC)အရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံ၏ HR မန်နေဂျာဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော်အောင်က ပြောကြားလိုက်သည် ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရွာသာကြီးစက်မှုမြို့ရှိ ကျောင်းစိမ်းဖိနပ်စက်ရုံတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းစက်ရုံ၏ …
မြမြဝိညာဉ်ပူးကပ်မှု ကျောက်စိမ်းစက်ရုံမှာ တရားဝင် ရှင်းပြီ ( ရုပ်သံ )…
မြမြဝိညာဉ်ပူးကပ်မှု ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် . .စာရင်းဇယားတွေရှိချက်များ နယ်မြေကွင်ဆင်းလေ့လာမှုများ ဗီဒီယိုဖိုင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြောဆို မှုမှာ မှန်ကန်မှုမရှိသလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိကြောင်း ကျောက်စိမ်းစက်ရုံHR မန်နေဂျာကို ဇော်ဇော်အောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် မြမြဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်မှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်တာပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်ခံရသူမဇာခြည် လာရောက်ခဲ့ပြီး မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်မှုကိုယခုလိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ် ။ ရုပ်သံကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် The Silent Talks —————————– unicode မွမွဝိညာဉျပူးကပျမှု …
သြစတေးလျ နိုင်ငံအစိုးရဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တောကြောင်တွေကို သတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တောကြောင်တွေကို အပြတ်ရှင်းဖို့ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၂၀ ကြားအချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကိုပေးထားခဲ့ပြီး အရေအတွက် ၂ သန်းခန့် သတ်ပစ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ New York Times ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ တောကြောင်တွေဟာ တောတွင်းမှာရှိတဲ့ ရှားပါးမျိုးစိတ်သတ္တဝါတွေကို သတ်ပစ်တာကြောင့် မျိုးတုန်းပြီး အပြတ်ရှင်းဖို့ သြစတေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Josh …
စိတ်ဝင်စားစရာ တောင်ကြီး လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုအကြောင်း သိရသမျှအပြည့်အစုံ
တောင်ကြီးမြို့ ကံ သာရပ်ကွက် မင်္ဂလာလမ်းရှိမြင်းဖြူနှစ်ကောင် တိုင်းရင်းဆေးတိုက် တွင် ဧပြီ ၂၇ ရက် ညဉ့်နက်ပိုင်းက လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တောင်ကြီးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကအတည်ပြုသည်။ အဆိုပါနေအိမ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဧပြီ(၂၈) ရက် နံနက် အလုပ်ဆင်းရန်ဆေးတိုက်သို့ လာရောက်ချိန်မှ စတင်သိရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲ မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည် လူသတ်မှုသည် ဆေးတိုက်ပိုင်ရှင် ခရီးသွားနေချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မွေးစားသမီး၊ …
“အရင်က တော့ အရမ်းချစ်တယ်ဆို” ခုတော့ ရက်စက်လိုက်တာဟာ…….
“အရင်က အရမ်းချစ်တယ်ဆို” လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြာသောအခါ “သိပ်ချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့သူက ကိုယ့်အတွက်ရန်သူ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ သိလာ ညီမလေး?… ဆင်ခြင်တတ်အောင် တင်ပေးပါတယ်။ ရည်းစားစကား အပြောခံတုံးက အပြောကောင်းတာကို “အဲဒါပဲ အချစ်စစ်” လို့ မခံယူပါနဲ့၊ အကြီးအကျယ် မှားသွားလိမ့်မယ်၊ ညီမလေး ….. ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောကောင်းတာမှာ မသာယာမိပါစေနဲ့။ အပြောကောင်းတာကို ယုံမိပြီး …
နှင်းဆီပန်းတွေဟာ ပန်းတွေထဲမှာ အလှဆုံးပန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုလှပတဲ့ တော်ဝင်နှင်းဆီတွေကို အိမ်မှာတင်လွယ်ကူစွာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာနှင်းဆီစိုက်ပျိုးချင်သူတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ အာလူးနဲ့ နှင်းဆီပင်စိုက်ပျိုးနည်း လျှို့ဝှက်ချက်လေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်. လိုအပ်တဲ့စ္စည်းလေးတွေကတော့ ဒီမှာပါ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြတ်ထားတဲ့ ၈လက်မခန့်အရှည်ရှိတဲ့ နှင်းဆီကိုင်းတစ်ကိုင်း (အပွင့်ပါရမည်) အာလူး (တစ်လုံးကို နှင်းဆီတစ်ကိုင်းစာ) ခဲတံ သို့မဟုတ် ရှည်ပြီး ချွန်တဲ့ တုတ်ချောင်းတစ်ခု အပင်ဟော်မုန်းဆေး (အမြစ်အတွက် …
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ခန္တာကိုယ်က Smart ကျ​နေဖို့ဆိုရင် ဒီနှစ်သစ် ၂၀၁၉ မှစပြီး ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ…
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ခန္တာကိုယ်က Smart ကျ​နေဖို့ဆိုရင် ဒီနှစ်သစ် ၂၀၁၉ မှစပြီး ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ… 1. ရေများများသောက်ပါ 2. မနက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကိုတော့ မင်းသားလေးလိုစား၊ ညစာကိုတော့သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါနော်) 3. သစ်ပင်ပေါ်က ရတဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ၊ 4. ဘ၀မှာ3…